जीवनशैली – Rabin's Blog
Home > जीवनशैली
गर्भ नरहने गरि यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए यौन सम्पर्कको लगत्तै पछी १० मिनेट यसो गर्नुहोस
Buletin Post July 20, 2018 जीवनशैली	0
-डा. राजेन्द्र भद्रा म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ। मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो। सुरुमा सन्तानको चाहना नभए पनि हाल हामीले सन्तान खोजेका छौं, तर हालसम्म मेरो गर्भ रहेको छैन। कतै मेरो गर्भ नरहने त होइन ? मलाई डर लागिरहेको छ। मैले के गर्दा चाँडो गर्भ रहन्छ ?विवाह भएको
आमाबुवा सानैमा गुमाएकी एउटी टुहुरी साबीकाे एसर्इर्इमा ४ जिपिए सहित उत्कृष्ट – भिडियो सहित
Buletin Post June 29, 2018 जीवनशैली, भिडियो	0
ललितपुर । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिस्थित इमाडोलमा रहेको अनन्त माध्यमिक विधालयमा अध्ययनरत साबी बि.क.ले यस वर्षको एसईई परिक्षमा ४ जिपिएका साथ उत्कृष्ट अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएकी छिन्। भविष्यमा राम्रो पढेर डाक्टर बन्ने सपना बोकेकी साबी बि.क., आमाबुवा सानैमा गुमाएकी एउटी टुहुरी केटी हुन्। म्याग्दीको पालीखेतको एउटा निकै विपन्न परिवारमा जन्मिएकी साबीले
Buletin Post April 9, 2018 जीवनशैली, स्वास्थ्य	0
हरेक व्यक्ति जीवनमा एकपटक डिपे्रसनको सिकार हुने गर्छन् । डिप्रेसन यस्तो मनोदशाा हो जसमा व्यक्तिलाई हरेक कुरा निरर्थक लाग्न थाल्छ । व्यक्ति कुनै पनि काम गर्न मन नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसपछि व्यक्ति दुःखी गाना सुन्नेदेखि एक्लै बस्ने अवस्थासम्म पुग्ने गर्छ । सामान्य अवस्थामा एक्लै बस्नु केही हदसम्म ठिकै पनि हो ।
अचम्मको जात्रा : जहाँ जीवित देवताको गोप्य भविष्यवाणी हुन्छ
admin March 31, 2018 जीवनशैली, समाचार, समाज	0
नुवाकोट । नुवाकोटमा ‘सिन्दूरे जात्रा’को रौनक छाएको छ। जीवित देवता तथा भैरवीदेवी मन्दिरका पुजारी (धामी) हरिमानसिंह डंगोल र उहाँकी जीवन संगिनी (धमिनी) लाई पुज्ने र देशमा आगामी वर्षमा के हुन्छ भनी गोप्य भविष्यवाणी गर्ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परानुसार शुक्रबारदेखि यो जात्रा सुरु भएको हो। स्थानीयवासीन्दाको सहयोगमा नेपाली सेना श्रीनाथ गण देवीघाटले
admin March 31, 2018 जीवनशैली, भिडियो, मनोरञ्जन	0
एजेन्सी । बलिउडमा किंग खानले परिचित शाहरुख खानकी छोरी सुहानाको स्विमिङ सुटमा सजिएकोे तस्बिर अहिले भाइरल भएको छ। उसो त सुहानाले अहिले कुनै पनि हिन्दी चलचित्रमा डेब्यू गरेकी छैनन् तर पनि उनको समाजिक होस् वा व्यक्तिगत हरेका क्रियाकलापले चर्चा पाउने गरेको छ । तस्बिरमा सुहाना आफ्नी साथीसँग स्विमिङ पूलमा रमाइरहेको